ग्रसनीशोथ लक्षण | बेजिया
टोनी टोरेस | 09/06/2021 23:55 | रोगहरू
ग्रसनीशोथ, घाँटी दुख्ने, वा टन्सिलिटिस? तापनि यी सर्तहरू प्राय: अन्धाधुन्ध प्रयोग गरिन्छ एउटै कुरा व्यक्त गर्न, सत्य यो हो कि यी धेरै फरक समस्याहरू हुन्। घाँटीले भाइरसको परिणामस्वरूप चोट पुर्याउन सक्छ, जसले टन्सिलको वरिपरि सूजन गराउँछ, तर टोन्सिल आफैले गर्दैन। जब यो हुन्छ, यो विशेष गरी टाँसिलाईटिस हो जुन विभिन्न कारणहरूले गर्दा हुन सक्छ।
तर जब त्यहाँ ग्रसनीशोथ हो, वास्तवमा के हुन्छ भन्ने कुरा ग्रसनी फुलेको छ। यो सूजन हुन्छ ब्याक्टेरिया संक्रमणको परिणाम स्वरूप। यो संक्रमणले टोन्सिलको साथसाथै सम्पूर्ण घाँटी क्षेत्रमा गम्भीर सूजन निम्त्याउँछ। ग्रसनीशोथ सँगसँगै दुखाइ, ज्वरो, निल्न कठिनाई, र असुविधा हुन्छ जुन प्राय एक हप्तासम्म रहन्छ।
1 ग्रसनीशोथका लक्षणहरू के हुन्
1.1 ग्रसनीशोथको लागि उपचार
1.2 ग्रसनीशोथ रोक्नुहोस्
ग्रसनीशोथका लक्षणहरू के हुन्
एक अवस्थापित घाँटी दुखाइको सामना गर्नुपर्दा, ठूला नतिजाबाट बच्न रोक्नको लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। जे होस्, जब ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुन्छ, लक्षणहरू प्रत्येक केसमा देखा पर्नबाट रोक्न धेरै गाह्रो हुन्छ। सम्भावित ग्रसनीशोथ पत्ता लगाउन, डाक्टरको अफिसमा जानु उत्तम हुन्छ ताकि निदानको अतिरिक्त, एन्टिबायोटिक कोर्स दिनुहोस् जसले संक्रमण खाली गर्दछ.
यी ग्रसनीशोथका लक्षणहरू हुन् यसले तपाईंलाई कहिलेकाँही दुखेको घाँटीलाई संक्रमणबाट अलग गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन औषधि उपचारको आवश्यक पर्दछ।
घाँटी दुखाइ: The घाँटी दुख्ने यो ग्रसनीशोथको मुख्य र सबै भन्दा स्पष्ट लक्षण हो। तपाईं एपी देख्न सक्नुहुन्छतिम्रो घाँटीमा कडा दबाब, टन्सिलको वरिपरि मध्य क्षेत्रमा।
फुलिएको टन्सिल: जब ग्रसनीको सूजन आउँछ, टन्सिलहरू प्रभावित हुन सक्छ र गम्भीर रूपमा सूजन हुन सक्छ। के सामान्यतया निल्न रोक्दछ, निल्यो निगल्ने साधारण इशाराको साथ पनि कडा पीडा उत्पन्न गर्दछ।
बुबा: संक्रमणले ज्वरो, साथै सामान्य अस्वस्थता निम्त्याउन सक्छ। मांसपेशी दुख्ने र कमजोरी। यी लक्षणहरू फ्लूको जस्तै मिल्दोजुल्दो छ।
घाँटीमा सूजन लिम्फ नोडहरू: घाँटीमा लिम्फ नोडहरू तल्लो बaw्गारामा भेटिन्छ, घाँटी र ग्रसनीमा जोडिएको। यदि संक्रमण महत्वपूर्ण छ भने, नोडहरू यति सूजन हुन सक्छ कि ना the्गो आँखाले देख्न सक.
ग्रसनीशोथको लागि उपचार
ग्रसनीशोथको उपचार गर्ने एक मात्र प्रभावकारी तरिका भनेको आफ्नो डाक्टरलाई भेट्न। यो आवश्यक छ कि विशेषज्ञले फ्यारेन्जाइटिसका कारणहरू, साथै यसको गम्भीरतालाई पनि विश्लेषण गर्न पर्याप्त उपचारको लागि विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। किनकि यस समस्यालाई सही तरीकाले निको नपार्नुको जोखिमले पुरानो फरेन्जाइटिस निम्त्याउन सक्छ। उपचार को सेवन को माध्यम बाट जान सक्छ विशिष्ट एन्टिबायोटिकको साथ साथै पीडा निवारक.
उच्च तरल पदार्थ सेवन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि ज्वरोले डिहाईड्रेसन निम्त्याउँछ। थप रूपमा, यो थप्नु पर्छ कि निगलनमा कठिनाईको कारणले हुन्छ कि केही दिन तपाईं सायद कुनै ठोस खाना लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले, तातो तरल पदार्थ को उपभोग, धेरै पौष्टिक ब्रोथ, प्राकृतिक रस भिटामिनले भरिएको र निस्सन्देह, धेरै पानी।
आराम रिकभरीको आधारभूत अंश हो, यस तरीकाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबूत गर्न सकीन्छ जब संक्रमण संग लडने। तपाईं पकाउने सोडा र पानीको साथ जुगाड़ गरेर तपाईंको घाँटी निको पार्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। जति सक्दो आराम गर्ने कोशिस गर्नुहोस्, घाँटीलाई झिजो लाग्नबाट जोगिन कुरा नगर्नुहोस् र तपाईंको सामान्य गतिविधिहरूमा फर्कनु अघि यसलाई पूर्ण रूपले निको हुन दिनुहोस्।
प्रत्येक केसमा उपयुक्त उपचार प्राप्त गरीरहेको छैन ग्रसनीशोथ प्रमुख समस्या पैदा गर्न को कारण कानको संक्रमण वा साइनसाइटिस जस्तो। त्यसैले उपचारको सम्बन्धमा विशेषज्ञको सिफारिसहरू अनुसरण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। आवश्यक प्रतिरोधात्मक उपायहरू लिनुको साथसाथै हातले स्वच्छता समावेश गर्दछ, धेरै चिसो पेय पदार्थहरू हटाउने वा घाँटीलाई अत्यन्त चरम वातावरणमा सुरक्षित राख्ने।
प्रायः जसो घाँटी संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ, केही आधारभूत सावधानी अपनाउँदै। ग्रसनीशोथका लक्षणहरू देखाउने मानिसहरूबाट टाढा बस्न आवश्यक छ, यसकारण, यदि तपाईं घरमा बच्चाहरू छन् भने, तपाईंले उनीहरूले उनीहरूलाई टाढा नजान यो पक्का गर्नुपर्छ। एक मास्क को उपयोग, साथ साथै राम्रो हात स्वच्छता तपाईं यो र अन्य भाइरस विरुद्ध आफ्नो परिवारको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » रोगहरू » ग्रसनीशोथका लक्षणहरू
एक विषाक्त सम्बन्ध पछि को सामना कसरी गर्ने